Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay wararka la xiriirinayo inay heshiis la gaareen Griezmann – Gool FM
Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay wararka la xiriirinayo inay heshiis la gaareen Griezmann
(London) 17 Juuunyo 2019. Madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa beeniyay in kooxdiisa ay heshiis la gaartay weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann si ay u soo xero galiyaan inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Josep Maria Bartomeu ayaa sheegay in Barcelona aysan wax heshiis ah la gaarin xiddiga reer France Antoine Griezmann, oo 28 sanno jir ah, si uu ugu biiro xagaagan, isagoo sheegay inaysan waxba ka jirin arintaas.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi ku aadan arintan uu bixiyay Madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu wuxuuna yiri:
“Waxaan mar walba sheegnaa, inaan la hadlin Antoine Griezmann, mana jiraan wax naga dhexeeya, waan arki doonaa sida uu suuqa u hormari doono maalmaha iyo todobaadyada soo socda”.
“Waxaana weli heysanaa seddex bilood ee kala ah Juun, Luulyo iyo August, arrimaha ku saabsan suuqa kala iibsiga, waxaa jiri doono kuwo bixi doono iyo kuwo imaan doono, waxaan sidoo kale fiirin doonaa kooxda labaad ee Barcelona, ​​oo leh ciyaartoy aad u fiican”.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu xiddiga reer France ee Antoine Griezmann ku dhawaaqay inuu ka tagayo Atletico Madrid saddex isbuuc ka hor, waxaa si aad ah loola xiriiriyay kooxaha Barcelona, ​​Manchester United, Paris St Germain iyo Bayern Munich.
Kooxda Chelsea oo heshiis afka ah la gaartay badalka Maurizio Sarri
Kubadda lagu ciyaari doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub oo la shaaciyay.... + SAWIRRO